Ndịọrụ Intanet - Ihe ị ga-atụ anya mgbe ị na-eleta anyị
Ihe ị ga-atụ anya mgbe ị na-eleta anyị
Nke a bụ ihe ị ga-atụ anya mgbe ị na-eleta anyị.
Ekpere: N'oge ofufe, ọtụtụ n'ime ndị ikom ga-edu ọgbakọ ahụ n'ekpere ihu ọha.
Ọrụ 2: 42 "Ha nọgidekwara na-eguzosi ike n'ihe nkuzi nke ndịozi na mkpakọrịta, na nyawaa achịcha na n'ekpere.
Egwú: Anyị ga-abụ abụ dị iche iche na abụkọ ọnụ, otu onye ma ọ bụ karịa ndị ndu egwu. A ga-akpọ ha ụda capella (na-enweghị ihe egwu). Anyị na-abụ abụ n'ụzọ a n'ihi na ọ na-agbaso ụkpụrụ nke ụka nke narị afọ mbụ na nke a bụ nanị ụdị egwu e nyere ikike na Agba Ọhụrụ maka ofufe.
Ndị Efesọs 5: 19 "na-agwa ibe ha okwu n'abụ ọma, na abụ na abụ ime mmụọ, na-abụ abụ ma na-abụ abụ olu ụtọ n'ime obi gị nye Onyenwe anyị,"
Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị: Anyị na-eri nri anyasị nke Onyenwe anyị kwa ụbọchị, na-agbaso ụkpụrụ nke ụka nke narị afọ mbụ.
Ọrụ 20: 7 "Ma n'ụbọchị mbụ nke izu ụka, mgbe ndị na-eso ụzọ gbakọtara iji gbajie achịcha, Pọl, njikere ịpụ n'echi ya, gwa ha okwu ma nọgide n'ihu ozi ruo etiti abalị."
N'ikere Nri Anyasị nke Onyenwe anyị anyị na-echeta ọnwụ Onyenwe anyị ruo mgbe Ọ ga-abịa ọzọ.
N'ihi na m natara n'aka Onyenwe anyị ihe m nyekwara gị: na Onyenwe anyị Jizọs n'otu abalị ahụ Jizọs rarara nye weere nri, mgbe O kelesịrị ya, ọ nyawara ya wee sị, "Were, rie; nke a bụ ahụ m nke gbajiri agbaji maka gị; mee nke a ka unu wee cheta m. "N'otu ụzọ ahụ, Ya onwe ya weere iko ahụ mgbe nri anyasị gasịrị, na-asị, 'iko a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ọbara m. Emela nke a, mgbe nile ị na-aṅụ ya, na-echeta m. "N'ihi na mgbe ọ bụla ị na-eri achịcha a ma ṅụọ iko a, ị na-akpọsa ọnwụ Onyenwe anyị ruo mgbe Ọ ga-abịa.
Inye: Anyị na-enye onyinye maka ọrụ nke ụka kwa ụbọchị mbụ n'izu, na-aghọta na Chineke agọzila onye nke ọ bụla n'ime anyị. Chọọchị na akwado ọtụtụ ọrụ ọma ndị chọrọ nkwado ego.
1ST Kọrịnt 16: 2 "N'ụbọchị mbụ n'izu ka onye ọ bụla n'ime unu hapụ ihe ọ bụla, na-echekwa ihe dị ka ọ ga-eme nke ọma, ka ọ ghara inwe nchịkọta mgbe m ga-abịa."
Ọmụmụ Baịbụl: Anyị na-etinye aka n'ọmụmụ Bible, ọ bụ site na nkwusa nke Okwu ahụ, kamakwa site n'ịgụ Bible na izi ezi.
2nd Timothy 4: 1-2 "Ana m enye gị iwu n'ihu Chineke na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe mgbe ọ ga-apụta na alaeze Ya: Kwusaa okwu ahụ: Dọọ njikere n'oge na n'oge oge. ịba mba, ịdọ aka ná ntị, na ogologo ntachi obi niile na izi ihe. "
Ná ngwụcha nke okwuchukwu ahụ, a ga-akpọ ndị ọ bụla chọrọ ịza òkù. Iji mụtakwuo banyere Iso Ụzọ Kraịst, ịghọ Onye Kraịst ma ọ bụ ịrịọ maka ekpere nke ụka, biko mee ka a mara mkpa gị.
A na-ewere ozi ofufe anyị dịka ọdịnala maka ụka nke Kraịst. Ọ bụghị dịka oge ma ọ bụ ihe egwu. Anyị na-agbasi mbọ ike ife Chineke n'ime Mmụọ na Eziokwu.
John 4: 24 "Chineke bụ Mmụọ, ndị na-efe ya aghaghị ife ofufe n'ime mmụọ na n'eziokwu."